Uhambo lweHero - Ukuwela iNqununu kunye novavanyo
Eli nqaku liyinxalenye yethu kwinqanaba leqhawe leqhawe, ngokuqala ngeHarri's Journey Introduction kunye neArchetypes yohambo lweHero .
Iqhawe, lixhobile izipho zomcebisi, liyavuma ukuhlangabezana nohambo. Le yinto yokujika phakathi koMthetho omnye kunye noMthetho weBini, ukuwela kwihlabathi eliqhelekileyo kwilizwe elikhethekileyo. Iqhawe lizinikezele ngenhliziyo yonke kwaye akukho phenduka.
Ngokutsho kukaChristopher Vogler Uhambo lomlobi: Ulwakhiwo lwama-Mythic , ukuwela umda wokuqala luba ngumphumo wamandla angaphandle aguqula inkambo okanye ubunzima bebali: umntu uthinjwa okanye wabulawa, isiphepho siyabetha, iqhawe alikho kwizinto ezikhethiweyo okanye iqhutywe phezu kwebhanki.
Iziganeko zangaphakathi zinokuthi zibonise ukuwela kwembombo: umphefumlo onomphefumlo uphumelele kwaye wenza isigqibo sokubeka engozini yonke into ukuze utshintshe ubomi bakhe, uVogler ubhala.
IiHlathi ziyakwazi ukuhlangabezana nabalondolozi bendawo kule ndawo. Umsebenzi weqhawe ukujonga indlela ethile malunga nabagadi bamagada. Abanye abalondolozi bayagula; amandla abanye kufuneka ahlanganiswe yiqhawe, oqonda ukuba umqobo unenjongo yokukhuphuka ngaphezu komda. Abanye abalondolozi bafuna ukuba bavunywe, ngokweVogler.
Abalobi abaninzi babonisa oku kuhamba ngezinto eziphathekayo ezifana nezango, amasango, amabhuloho, iinqanawa, ulwandle, okanye imilambo.
Unokwazi ukubona ukutshintsha okucacileyo kwamandla kweli nqanaba.
Iqhwithela ithumela uDorothy kwilizwe elikhethekileyo. UGlinda, umcebisi, uqala ukufundisa uDorothy imigaqo yale ndawo entsha, umnika i-ruby sms, kunye nesigqibo, ukumthumela phezu komda apho aya kwenza abahlobo, adibene neentshaba kwaye ahlolwe.
Iimhlaba ezimbini zivakalelwa ngokwahlukileyo, isiqhelo esahlukileyo, izinto eziphambili kunye nezinto ezixabisekileyo, imithetho eyahlukileyo. Umsebenzi obaluleke kakhulu kweli nqanaba kwibali kukuvavanywa kweqhawe lokumlungela iziganeko ezizayo, ngokweVogler.
Uvavanyo olulodwa lusetshintsha ngokukhawuleza kwimithetho emitsha.
Ihlabathi elikhethekileyo lisoloko lilawulwa yi-villain okanye isithunzi esibekele imigibe yabangenayo. Iqhawe lidala iqela okanye ulwalamano kunye necala. Ufumanisa iintshaba kunye nabadlali.
Oku kuku "ukukwazi" isigaba. Umfundi ufunda malunga nabalinganiswa ababandakanyekayo; iqhawe liqokelela amandla, lifunda iindophi, lilungiselele isigaba esilandelayo.
Iziganeko ezibalulekileyo zoMnqophiso woBukumkani baseAztec